लकडाउनका ५५ दिनमा सरकारले के तयारी गर्‍यो ? देउवा ( पूर्णपाठ सहित)
> लकडाउनका ५५ दिनमा सरकारले के तयारी गर्‍यो ? देउवा ( पूर्णपाठ सहित)
काठमाडौं, ४ जेठ । प्रतिधिसभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेता शेरबहादुर देउवाले सरकारलाई कोभिड १९ ले हुनसक्ने क्षतिबारे कुनै ज्ञान नै नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लकडाउन गरेको ५५ दिनमा सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण र रोकथाममा के तयारी गर्‍यो भन्ने प्रश्न गरेका छन्।
यसबीचमा सरकारले कोरोना नियन्त्रण तयारी केही पनि नगरेको देउवाले बताए।
‘म प्रश्न गर्न चाहन्छु- लकडाउनको समयमा सरकारले के तयारी गर्‍यो?,’ आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा भाग लिँदै देउवाले भने, ‘सरकारले केही गरेन। तयारीविहीनता छ।’